प्रा.डा. जनार्दन सुवेदी बुधबार, भदौ १७, २०७७, १७:५४:००
जुन समाज भाइरसभन्दा छिटो दौडिरहेको छ, त्यो समाज कमसेकम छेकबार लगाउँदै सहज परिस्थितिमा अवतरण गर्न सफल भइरहेको छ । तर जुन समाज भाइरसको पछिपछि लागिरहेको छ, त्यो समाजले ठुलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । शक्ति सम्पन्न र विकसित भनिएका मुलुकले समेत संकटको सामना गरिरहेका बेला हाम्रो देश चाहिँ के गरिरहेको छ ? हाम्रो चासोको विषय त्यही हो । हाम्रो देश भाइरस रोक्न त्यसअघि दौडिएर रणनीति बनाइरहेको छ कि भाइरसको पछिपछि घिस्रिएर दुःख पाइरहेको छ ? अहिलेसम्मको सरकारी तयारी र चालढाल हेर्दा यो भन्न कुनै हिच्किचावट मान्नुपर्ने अवस्था छैन कि– हामी भाइरसको पछिपछि हिँडिरहेका छाैं ।
त्यस्तो भौगोलिक बनावट र अविकास रहेको हाम्रो समाजका दूरदराजमा यस भाइरसले पारिरहेको अवस्थाकाे कल्पना गर्दा पनि मलाई अत्यास लागेर आइरहेको छ । यो भयाभह अवस्था रोक्नका लागि सरकारको उपस्थिति निम्छरो छ । सरकारले हामीलाई विगत ६ महिनादेखि घरमै बन्द गरेर आफू कोभिडविरुद्ध लडिरहेको बताइरहेको छ । तर यथार्थमा हामीलाई घरभित्रै बन्दी बनाएर सरकार र सत्तारुढ दल आफ्नो सत्ताका लागि लडिरहेको लोकले प्रष्ट देखेकै छ ।
देशले महासंकट भोगिरहेका बेला मानिसको जीवन बचाउन खरिद गरिएका औषधिजन्य सामग्रीमा समेत ¥याल काढ्ने नेपालको जस्तो सरकार सायद संसारको कुनै पनि देशमा छैन होला । बिरामी भएर जनताको जीवन बचाउन आवश्यक समय दिन नसकेको भन्दै पदबाट बिदा लिएका सिन्जो आबेलाई देखिरहेको नेपाली समाज देशको भन्दा आफ्नो स्वास्थ्यका लागि बढी समय दिनुपर्ने बिरामी प्रधानमन्त्रीलाई बोक्दा कस्तो महसुस गर्दो होला ? यी सबै कारणले बर्तमानमा कोरोना भाइरसले नेपाली समाजलाई उद्वेलित बनाएकै छ । कामना गरौँ, नेपाली समाजले योभन्दा बढी मृत्युको संख्या गणना गर्नु नपरोस् । तर हामीले कामना गरेर मात्रै पनि पुकारा सुनिने छाँटकाँट देखिएको छैन । भाइरसको संक्रमण डढेलोझैँ फैलिरहेको छ भने मृत्यु संख्या पनि दिनानुदिन बढेको बढयै छ ।
एउटा आशाको रुपमा रहेको कृषिको हविगत पनि नेपालबाट प्रकाशित भएका ताजा तस्बिरहरुले देखाइरहेका छन् । माक्र्सवादको व्याख्या गर्न सक्ने दर्शनशास्त्रीको परिचय बनाएका नेता घनश्याम भुसालले समालेको कृषि मन्त्रायबाट पाउनुपर्ने मल नपाएर किसानहरु छटपटाइरहेका तस्बिरले मन अमिलो मात्रै बनाएको छैन, आगामी भयको मात्रालाई झन बढाइदिएको छ । कोरोना महामारीको समेत पर्वाह नगरी मल पाउने आशामा कैयौँ किलोमिटर लाइन लागेका तस्बिरले कृषिबाट पनि आशातीत योगदान होला भनेर विश्वास गर्ने अवस्था छैन । त्यसो हुँदा हामीले तथ्यहरुको अध्ययन र धरातलको पहिचान नै नगरी अन्य देशसँग तुलना गरिरहेका छौँ । त्यो निकै दुःखदायी कुरा हो । नेपाली शासकहरुलाई हेक्का होस्, मोटो दुब्लाउन्जेलसम्म दुब्लो मरिसक्छ भन्ने तीतो यथार्थ । उनीहरुले तुलना गरिरहेका देशहरु मोटा छन्, उनीहरुलाई कोरोना कहरले दुब्लोसम्म बनाउला, मारिहाल्दैन । तर नेपाल त अहिले नै दुब्लो छ । अनि ती मोटा देशहरु दुब्लो हुन्जेल हाम्रो देश मरिसक्ला भन्ने किन हेक्का नराखेको ? त्यसैले अन्य देशले पनि सकिरहेका छैनन्, त्यसैले हामीले मात्रै हो र भनेर उम्किने छुट हामीलाई कहाँ छ र ? त्यो वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै ओली जी र उनका सारथीहरु देश र जनताप्रति संवेदनशील होऊन् भन्ने मेरो कामना छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १७, २०७७, १७:५४:००